सपना देख्नु सामान्य कुरा हो । हामी सबैले कहिले काहीँ केहि न केहि सपना देखीरहेका हुन्छौँ । तर कहिले काही भने हामीले निकै डर लाग्ने सपना देख्ने गर्छौ । जसका कारण जब हामी ..
निखिल र नीताको नयाँ जोडी , निभर्यले पाउला सफलता ?
एक्सन किङ निखिल उप्रेती र नीता ढुङ्गाना एकसाथ ठूलो पर्दामा देखिने भएका छन् । उनीहरु निभर्यमार्फत पहिलोचोटी सँगै देखिने भएका हुन् । निखिलसँग पर्दा बाँड्न पाउँदा नीता निक..
प्रियंकाको पीडा – कालो भएका कारण अमेरिका छाड्नु परेको थियो
अभिनेत्री प्रियका चोपडा बलिउड र हलिउड दुवै ठाउँमा सफल मानिन्छिन् । उनलाई दर्जनौ बलिउड फिल्मले अभिनेत्रीको रुपमा स्थापित गराए भने एक हलिउड टेलिसिरियल क्वान्टीकोले हलिउ..
खुसी विराट र अनुश्का , अरुले जे भनेनी भनुन्
अभिनेत्री अनुश्का शर्मा किक्रेटर विराट कोहलीको सम्बन्धमा कहिले खटपट र कहिले मेलका खबरहरु सार्वजनिक भई रहेका छन् । केहि समय अघि मात्रै उनीहरु एकअर्काबाट अलग भएको खबरले ब..
गिरान्चौर पुन निर्माणका लागि झण्डै ५० लाख सहयोग प्राप्त : दिण्डु एक्लैले दिए ६ लाख
गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डु लामा ह्योल्मोले ६ लाख ६ हजार ६ सय ६ रुपैँया सहयोग गरेका छन् । गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डुले दिएको यो रकम न..
मेरा गीतको भिडियो एउटै नदेखियोस भनेर निर्देशक चेन्ज गर्छु : गायक सुनिल गिरी
को होला त्यो मसँग आँखा जुधाउनेको सफलतापछि तिमी आउँछौ कि भनी ल्याए्, सुनिल गिरीले । यस गीतलाई पनि दर्शक श्रोताले उत्तिकै रुचाईदिएका छन् । देउराली भन्ज्याङ, लेकाली माया, ..
तनाव भगाउन पढ्नुहोस् ,मिठाईलालका ८ जोक्स
देशमा घटेका समसामयिक कुराहरुलाई कमेडी रुपमा प्रस्तुत गर्न माहीर छन् संदिप क्षत्री । उनको कमेडी कार्यक्रम ह्वाट्स द फ्लप निकै चर्चित छ । यस कार्यक्रममा उनले धेरै थरि चरित्र निभाउँछन् । तर उनको मिठाईलाल चरित्र निकै चर्चित छ । मिठाईलालकै तस्वीरलाई लिएर बनाईएका ८ जोक्स पढ्नुहोस् ।
हट हिरोईनबाट साधु सन्त बनेका बलिउड सुन्दरी
एक बखत यस्तो थियो मोडल तथा सिङगर सोफीया हयात क्रिकेटर्सको लागि बिकीनी तस्वीरहरु खिचाउँथिन् । उनले आफ्ना नाङगा तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर चर्चा पनि बटुल्थीन् । तर तिनै सोफीयाले अहिले साधु बनेर चर्चा आफ्नो पोल्टोमा पारेकी छिन् । उनी अब सन्यासी बनेकी छिन् । दुई महिना पहिले मात्रै उनले ईन्स्टाग्राममा एक बिकीनी तस्वीर सेयर ..
गर्मीमा के खान्छन् सेलीब्रेटीहरु ?
गर्मी महिनालाई सेलीब्रेटीका लागि ग्लामरस महिना भनिन्छ । जाडोमा रहर हुँदाहुँदैपनि लगाउन नपाईएका फेसनेवल कपडा उनीहरु गर्मीमा खुलेरै लगाउन सक्छन् । तर, कतिपयलाई गर्मीमा खानपान नमिल्दा भने समस्या आउनसक्छ । गर्मीका बेला सरुवा रोगको प्रकोप फैलनसक्ने , छिट्टै संक्रमण हुने र खाना नपच्ने भएका कारण खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।..
आज मिति २०७३ साल जेठ ११ गते मंगलबारको दैनिक पत्रिकामा छापीएको राशिफल
कान्तिपुर दैनिकबाट नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
रणवीरसँगको डेटका बारेमा भारतीले मुख खोलीन्
केहि दिन पहिले मात्रै रणवीर कपुर र दिल्लीकी मोडल भारती मल्होत्राको अफेयर्सको चर्चा चलेको थियो । तर यस खबरलाई खण्डन गर्दै भारतीले आफू रणवीरका प्रेममा नभएको कुरा बताएकी छिन् । यति मात्रै नभयर उनले आजसम्म रणवीरलाई नभेटेको खुलासा समेत गरिन् । उनी प्रतीक नामका एक युवकलाई डेट गरिरहेकी छिन् । प्रतिकले आफ्नो हातमा भारतीको नामको [&helli..
यस्तो छ सलमान खानको फार्महाउस
सलमान खानको मुम्बईको पनवेलस्थीत फार्महाउस सधै चर्चामा रहन्छ । उनको फार्महाउसमा आराम गर्न उनीमात्रै जाँदैनन् । उनका आफन्तहरु पनि त्यहाँ जाने गर्छन् । सलमानको फिल्म बजरंगी भाईजानको केहि सिनहरु उनको यहि फार्महाउसमा शुट गरिएको थियो । पनवेलमा रहेको उनको फार्महाउसको नाम अर्पिता फार्म हाउस हो । बहिनीको नामबाट उनले यो फार्महाउसलाई चिना..
फिल्ममा सफल सम्बन्धमा असफल रेखा थापा
प्रेमगीतकी अभिनेत्री पुजा शर्मा फिल्मका को– स्टार प्रदिप खड्का र फिल्म निर्मातालाई फेसबुकबाट हटाएपछि मिडीयामा छाएकी छन् । फिल्म प्रेमगीतमा सबैले प्रदिपको अभिनयलाई मात्रै राम्रो र आफ्नो अभिनयलाई नराम्रो भनेको भन्दै उनले आफ्नो भडास प्रदिप माथि पोखेको धेरैले अड्कल लगाए । तर साँचो कुरा के हो पुजाले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेकी छैनन् । ..
राधीकाजीसँग जोडी जमेको थियो, कसैले कुरा लगाईदियो क्यारे मसँग गाउनै छाड्नुभो–पशुपती शर्मा
पशुपती शर्मा यतिबेला तिजको गीतको तयारीमा जुटेका छन् । हालै सुगर प्रेसर बोलको गीत युट्युवमा सार्वजनिक गरेका उनी स्टेज कार्यक्रमसँगै तीज गीतका लागी जुटेका हुन् । हामीसँगको कुराकानीमा पशुपतीले तीज गीतको प्रसंग आउने बित्तिकै राधिका हमाललाई सम्झे । “मैले तिजको गीत राधिका जीसंग गा’को थिएँ । उहाँलाई पनि मैले गरेर गीत चल्यो जस्तो लागेछ ..
Page 252 of 383« First«...102030...250251252253254...260270280...»Last »